डिभोर्स पछि स्मारिकाको यो हाल (हेर्नुस् भिडियो ) – Classic Khabar
August 27, 2021 105
चर्चित टिकटक स्टार स्मारिका ढकालको डिर्भोष भएको छ । धेरै दिनदेखि उनको डिभोर्सको चर्चा टिकटकमा व्यापक भएपनि उनका पूर्वपतिले आफुहरुले खुशी साथ अलग भएको जानकारी दिएका छन् । स्मारिकाका श्रीमान विवेक अधिकारीले हिजो टिकटकमै लाइभ आएर आफूहरुको सम्वन्ध अन्त्य भएको बताए पनि अन्त्य हुनुको कारण भने खुलाएनन् ।
आ–आफ्नै हिसाबले करियर अगाडि बढाउने भनेर आफुहरु छुट्टिएको र एक अर्कालाई अहिले पनि सम्मान गर्ने उनले बताए । सेलिब्रिटी भइसकेपछि श्रीमानलाई छोडेको आरोप आएपछि उनले यस्तो आरोप नलगाउन उनले आग्रह गरेका छन् ।
सम्वन्ध तोडिनुमा सबैका आफ्ना पर्सनल प्रोब्लम हुन्छन् । त्यो सबै भनिरहनुपर्ने जरुरत छैन । सम्वन्ध तोडिएको हो । हामी आफ्नै ढंगले आ–आफ्नो करियर अघि बढाउँ भनेर आपसी समझदारीमा राजीखुशीले छुट्टिएका हौं भन्दै विवकेले खुलस्त पारेका छन् ।
यहि डिभोर्सको कुरा र जथाभावी आफ्नो बारेमा फैलिएका दुस्प्रचारहरुले आफुलाई एकदमै पीडा दिएको र यथार्थ बास्तविकता नजानि र नबुझि कसैले पनि टिकाटिप्पडि नगर्दिनु भन्दै उनिले बिन्ति बिसाए सगै आफू बिरामि भइ दबाइ खादै गरेको कुरा पनि खुलाइन ।उनको मलिन अनुहारमा त्यो देखिन सकिन्थ्यो । हेर्नुस् भिडियो सामाग्री
Prevबिष्णु मझी बारे अहिले सम्म कै ठुलो खुलासा किन बिष्णु माझी आफ्नो बुवा आमा सँग पनि बोल्दिनन् र भेट्दिनन् ? भिडियो सहित
Nextश्रीमती मन नपरेपछि पतिले कोबरा किनेर ल्याए त्यसपछि चाले यस्तो चाल
त्यो मध्यरात १ बजे ओलीलाई के भनेर बिदा भएका थिए सोम पाण्डे ?
यि ५ महिनाकी बालिकाको के गल्ती थियो ? बुवाका भान्जाले उचालेर फाले तत्काल निधन